July Dream: Busy days
တခါတလေ အဲလို ဖိအားလေးနဲ့ လုပ်ရတာ အရသာတော့ ရှိသား အစ်ကိုရေ။ စိန်ခေါ်သံနဲ့ လုပ်ရတာဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်မလား၊ တောက်ပဲ ခေါက်မလား။ ဒါပေမယ့် ဆရာမင်းသိင်္ခပြောသလို ပြီးတော့လည်းပြီးသွားမှာပါပဲဗျာ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ပြောသလို ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပဲလေ။ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။
ကြိုးစားထား ကြိုးစားထား သယ်ရင်းရေ.. သေရင်ကိုယ်နောက်မပါဘူး. ပါမဲ့ဟာတွေကောလုပ်ဖြစ်ရဲလား. မင်းကိုသာ ငါမေးတာ ငါလဲ နိုးလို့ပဲ ဖြေရမှာပါလား
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံပြောရင် ကိုယ်ထွက်ပေါက် တစ်ခုတည်းကို မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာလှပေါ့။ ကိုယ်တွေ မလွတ်မြောက်ခင် အခြားသူတွေရဲ့ ဘ၀အမောတွေကို နိုင်သလောက်လေး ကူညီဖြေရှင်းပေးချင်တာက ပိုများနေလို့ လူမှူရေးဘက်ကို အချိန်ပေးတာ ပိုများနေတယ်။ ဆင်ခြေပေးတာနော်။ အဟီး။
အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်မှာ တရုတ်မချောချောလေး နှစ်ယောက် စီစဉ်ပေးမယ်ဗျာ ... အိုကေလား ကိုဂျူလိုင် ... :D :D :D